Muxuu ka yiri Ole Gunnar Solskjær kaddib guuldaradii lama filaanka ahayd ee ka soo gaartay Tottenham?? – Gool FM
(Manchester) 05 Okt 2020.Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa ka soo muuqday shirkiisa jaraa’id si uu qiil ugu sameeyo guuldaradii kooxdiisa ka soo gaartay naadiga Tottenham Hotspur.
Tottenham Hotspur. ayaa guul raaxo leh ka soo gaartay 10 xiddig kooxda Manchester United ah, kaddib markii ay kaga soo adkaadeen 1-6, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League.
Ciyaarta kaddib ayuu Ole Gunnar Solskjær u sheegay warbaahinta:
“Ma guuleysan kartid kulamada kubadda cagta adigoo sameynaya qaladaad shaqsiyeed, iyo inaad soo bandhigto qaab ciyaareed sidaan oo kale ah, Dabcan, waa wax laga walwalo, waana wax laga xumaado”.
“Waa maalintii iigu xumayd xirfadayda intii aan tababare u ahaa Manchester United iyo maalintii ugu xumayd ee dhammaan ciyaartoyda Manchester United”.
“Way adagtahay in la sharaxo hadda, koox aad u wanaagsan ayaa nooga adkaatay gurigeena, laakiin gacan weyn ayaan ka geysanay guuldarradan na soo gaartay”.
“Dabcan aniga ayaa masuuliyada qaadaya, aniga ayaa masuul ka ah arrintan, waa xanuun, waa wax laga xishoodo, waxaan idiin balan qaadayaa inaan ku dadaali doono sidii aan wax uga badali lahaa xaaladan ceebta leh”.
Intaas kaddib tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu ka hadlay kaarkii casaanka ahaa ee la siiyay Anthony Martial, wuxuuna yiri:
“Kaarka cas wuxuu sameeyay isbadal weyn, Martial xoogaa wuu dharbaaxay waxaana laga yaabaa in Érik Lamela uu u baahan yahay qaliin sababa la xiriira wixii dhex maray labadooda”.